APICMO dia mpamatsy fitaovam-pandaminana manokana sy fifanarahana R & D.
APICMO dia orinasa pharmaceutika izay miompana amin'ny sehatra manan-danja amin'ny fikarohana vaovao sy ny fampandrosoana ny oncology, manome ny fampandrosoana ny rafitra, ny fomba amam-panao manokana, ny famokarana betsaka ary ny tolotra hafa ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana fanafody ary ny orinasa pharmaceutika; APICMO amin'ny famokarana simika, biolojika azo avy amin'ny pharmaceutique, API sy ny fandoavam-bola Ny fandrosoana ny akora simika, ny fifehezana kalitao, ny famokarana cGMP, ny fitantanana ny tetikasa ary ny varotra dia manana tombony matanjaka.
APICMO dia manana ekipa R & D matanjaka sy mpahay siansa efa za-draharaha - Dr. Zeng zhaosen. Manana orinasa lehibe famokarana sy orinasa famokarana tetik'asa isika. Ny mpikambana ao amin'ny ekipa mpiandraikitra ny APICMO dia avy amin'ny firenena mandroso toa an'i Etazonia, Eoropa ary Japon. Mihoatra ny taona 10 tamin'ny traikefa momba ny indostria tao amin'ny orinasam-pambolena multinational. Taorian'ny folo taona farany nananganana ny tsena, APICMO dia manana fikambanana miara-miasa amin'ny orinasam-pambolena.
APICMO dia manome lanja lehibe amin'ny fiarovana sy ny fiarovana ara-tsaina ny mpanjifany. Ankoatra ny APICMO dia rafitra fiarovana matanjaka ara-tsaina, ny APICMO dia nanangana fitantanana tsara amin'ny fanatontosana ny zavatra andrasan'ny mpanjifa ICH. Ny mpanjifa APICMO dia miompana amin'ny orinasa madinika biopharmaceutical ho an'ny goavam-be iraisam-pahaizana iraisam-pirenena, avy amin'ny fikarohana fikarohana zava-mahadomelina sy ny fampandrosoana, ho an'ny laboratoires ao amin'ny institiota fikarohana, avy amin'ny ICH any amin'ireo firenena mandroso any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana toa an'i China sy India. Ny tetikasa APICMO sy ny vahaolana dia nosedraina avy amin'ny fampiharana ara-barotra teo aloha.
"APICMO dia ISO 9001: Certificat de 2008 ary ny hetsika ara-barotra rehetra dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fitantanana."
R & D FAHAFAHANA
manome ny fampandrosoana ny rafitra, ny fomba amam-panao, ny famokarana betsaka ary ny tolotra hafa ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana fanafody ary ny orinasa pharmaceutika.
Ny mpikambana ao amin'ny ekipa mpiandraikitra ny APICMO dia avy amin'ny firenena mandroso toa an'i Etazonia, Eoropa ary Japon.
Ny APICMO dia manome ny fanamafisana ny fizahana, ny kalitaon'ny fianarana, ny fandalinana ny fahalotoana ary ny fianteherana amin'ny fahamarinan-toerana mba hahazoana ny fepetra takian'ny mpanjifa IND sy NDA.
Ny APICMO dia mikatsaka ny hanatsara ny dingana ary hampihenana ny fandaniana ho an'ny mpanjifantsika. Nanangana tambajotra tsara sy azo itokisana amin'ireo orinasa Shinoa any Shina izahay mba hanomezana tolotra sy famokarana mahomby sy mahomby.
Akon'ny asam-pamonjen'ny olombelona
APICMO dia API nahazo ny loka, CMO Company.
TANJONA NATAON'I LABORATORIES
Ny fanadihadiana sy ny fanasitranana ny asan'ny siramamy amin'ny solifony steroidal papary vita amin'ny asidra sy ny oxime dia miaraka amin'ny fihetsika antitumor.
Fikambanana 5 miaraka amin'ireo Oniversiten'i 5 malaza ao Shina. University of Sichuan, University of China, University of Changzhou, Hunan University of Science and Technology, Institute of Chemistry, Academy of Sciences of Sciences (ICCAS)
Fanampim-pampandrosoana: hatramin'ny kilao ka hatramin'ny kilao an-jatony. Manana ekipa mpikatroka mpikambana ao amin'ny 10 manara-maso ny fikarohana ara-tsosialy isan-karazany amin'ny vokatra isan-karazany sy ny fikarohana momba ireo mpamatsy sarimihetsika sinoa, sns.
APICMO dia feno fahaiza-manao entin-tsaina
izay mikarakara bebe kokoa momba izany.
CEO & mpamorona
Miara-manorina, ny mpitarika ny orinasam-panjakana fototra; Ny PhD dia nahazo ny Oniversiten'i Fudan tamin'ny chemema organika. Mihoatra ny sivy taona amin'ny traikefa ara-tsiansa momba ny simia fanafody. Ny traikefa an-tsekoly tao amin'ny chimique fitambarana, ny simia fanafody sy ny fampidirana an-tsoratra ary ny fitantanana ny tetikasa.
Filoha Lefitra mpanatanteraka
Miara-manorina, ny mpitarika ny orinasam-panjakana fototra; Ny PhD dia nahazo ny Oniversiten'i Fudan tamin'ny chemema organika. Maherin'ny sivy taona amin'ny traikefa momba ny simia organika sy ny fampiasana fitaovam-pisefoana; pikarohana 10 momba ny fikarohana ao amin'ny gazetim-pahefana maoderina, miaraka amin'ny patanty sasantsasany mihoatra ny dimy.
Nahazo mari-pahaizana avy amin'ny Departemantan'ny chemo organika, Stanford University, Stanford University, ny Departemantan'ny simia sy simia, mihoatra ny taona 15 momba ny simika ara-organika simika, dia nanompo ny Pfizer Inc, tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny tsena iraisam-pirenena ary nanao zava-bita tsara.